Qalalaasaha Tigray iyo Abiy Axmed:- “Cadowga Gudaha Iyo Dibadaba Waan Iska Celineynaa” | Gaaroodi News
Qalalaasaha Tigray iyo Abiy Axmed:- “Cadowga Gudaha Iyo Dibadaba Waan Iska Celineynaa”
Ra’isal Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed
“Xabad joojinta ay dowladda dhexe gaartay si kale ayey u qaateen oo waxay billaabeen inay deegaanka Tigray ka huriyaan colaad hor leh”.
Wuxuu yiri: “Beesha Caalamkana waxay isku dayayaan in waddooyinkii looga talagalay in shacabka Tigray gargaarka loo mariyo ay TPLF dagaalka uga faa’ideysanayaan haddana hay’adaha gargaarka waxay isku dayayaan inay dowladda eedo ay mudneyn u soo jeediyaan,” ayuu yiri.
Dowladda dhexe ee Itoobiya ayaa Toddobaad ka hor xabbad joojin ku dhawaaqday, balse TPLF waxay xabbad joojinta ku xirtay toddobo shuruudood.
Shuruudahaasi waxaa ka mid ah: “Ciidamada Eritrea iyo kuwa deegaanka Amxaarada inay ka baxaan deegaanka Tigray, ayna ku laabtaan dagaalka ka hor halki ay joogeen”.
“Naf-huridda shacabkayaga aan u sameynay waxaa ka faa’ideystay kuwa daciifka ah ee aan fahmin, natiijona ma keenin. Xoogagga TPLF inay yihiin cadowga ugu weyn ee jiritaanka Itoobiya, waxaa caddeynaya ficilladooda. Annaga oo shacabka Itoobiya oo dhan kaashaneyno cadowgaasi waan iska difaaceynaa waana ka guuleysaneynaa.
Dagaalki bishii November 2020 ka dhex qarxay ciidamada dowladda dhexe iyo kuwa TPLF, ka dib markii ay maleeshiyaad daacad u ah TPLF weerareen saldhigga waqooyi ee ciidamada Federaalka, oo socday in ka badan 7 bilood, waxaa ku dhintay kumannaan qof inkasta oo aan tirada rasmiga ah la haynin.
Ciidamada dowladda dhexe, 28 bishii June 2021, markii ay ka soo bexeen deegaanka Tigray, xoogagga TPLF waxay billaabeen inay dib u qabsadaan caasimadda Maqale iyo magaalooyin kale oo deegaankaasi ku yaalla
Deegaanno in mudda ah ay ku muransanaayeen shucuubta Amxaarada iyo Tigrayga, waxaa gacanta ku dhigay malleeshiyaadka gaarka ah ee Amxaarada, tan iyo marki uu dagaalka Tigray billaawday.
Deegaannada Tigray hoostagayey balse Amxaaraduna ay sheegato waxaa ka mid ah Walqayt-Sagade, Satiit-Humera, Talamti iyo Raayaa